Malunga nathi -Shijiazhuang Fanshen Trade Co., Ltd.
Iziqhano zeegusha zesikhumba
Iiglavu zeegusha kunye neMittens
Patch iiglavu zezikhumba zeegusha
Iintsana mittens kunye neebhutsi
I-Earmuff kunye ne-Insole
Iigusha zeRugs kunye neMiqamelo
I-Shijiazhuang Fanshen Trade Co, Ltd.yasekwa ngonyaka ka 2002, ngaphambili yayisaziwa njenge workshop yezandla, iizandla ezahlukeneyo zezandla zeegusha kunye neiglavu zesikhumba, iminqwazi nezinye izinto zabarhwebi bamanye amazwe. Ukusukela ngo-2012, Sitshintsha ishishini lethu ekuyileni nasekuthengiseni abathengi bangaphandle. Utyalomali kumzi-mveliso wokuvelisa iimveliso zesikhumba kunye noboya kwisixeko saseGucheng, kwiPhondo laseHebei
Ngaphantsi kwefilosofi yoyilo "yokulula kunye nokuqaqamba", inkampani yethu yavelisa iiglavu zezikhumba zeegusha, iiglavu zezikhumba zeegusha, iminqwazi, iminqwazi yendlebe kunye nezinye iimveliso. Iimveliso ezithunyelwa eNtshona Yurophu, eUnited States, eCanada, eRashiya, eJapan, njalo njalo, ngakumbi isitayile esilula, ubuchule bokusebenza, kunye nesikhumba esikhethiweyo samkelwa ngabathengi bamazwe angaphandle. Kwangelo xesha, iqela lethu loyilo liqokelele ubutyebi bamava okuyila.
Ukusukela oko yasekwa, inkampani yethu ihlala inyanisekile, iphumelele-njengeenjongo zeshishini, ibambelela kwimisebenzi yorhwebo yamanye amazwe, ithobela imigaqo yorhwebo yamanye amazwe, yakha inkqubo yeQC engqongqo kunye nenkqubo yenkonzo egqibeleleyo. Ngoku siye saseka intsebenziswano ixesha elide ezinzileyo abasasazi basekhaya angaphandle kunye nabathengisi.
Sineqela elenziwa ngezandla labasetyhini, Zonke iiglavu zethu zezikhumba zeegusha zazibanjwa ngesandla ngobugcisa besiko lokuthunga kwaye kufuneka zigqitywe ngabasetyhini abanobuchule abaneminyaka engaphezulu kwe-10 yamava, kwaye ikwasisikhumba okanye iiglavu zezikhumba zeegusha kuphela. sineqela elibanjwe ngesandla ngolu hlobo!
Sibaphatha abathengi bethu ngendlela abathengi abathanda ukuphathwa ngayo, ngenkonzo ebhalwe igama lomntu, kulula ukutshintshiselana ngobunzima kunye nembuyekezo, kwaye sinika kuphela iimveliso ezivumela abathengi baneliseke.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi, siya kwenza konke okusemandleni ethu ukunceda.
IShijiahzuang Fanshen Trade Co., Ltd.